Fiatrehana ny fihibohana Maro ireo lesoka mila harenina
15 andro in'efatra izao no nanaovana ny fijanonana an trano na fihiboahana,nanamboka ny alatsinainy 23 martsa2020.
Nanomboka ny sabotsy 18 aprily teo indray ny fahefatra ,ilaina izy io hiarovana ny vahoaka amin ny coronavirus. Ireto anefa misy lafiny mila harenina. Ny zoma 17 aprily teo dia tafiakatra 5 ireo matin ny hanoanana vokatry ny tsy fisakafoana ka mivoaka mamonjy aina. Ankoatra ny tsy fahazoana maneho hevitra dia mety hitroatra ny vahoaka raha tsy misy fanampiana ampy sy mangarahara. Vokatry ny tsy fisian ny fitaterana dia sarety entin -tanana no hitondrana ny marary. Ny vatsy tsinjo izay hilofosan'ny fitondrana ankehitriny , tena maro be ny fanatsarana fomba fiasa miala atao amin'ny fitsinjarana azy.